Elu àgwà Rubber Y mgbanaka X mgbanaka v mgbanaka Manufacturer na Supplier | GS Akara
Ihe: NBR, SILICON, FKM
Size: dị ka ojiji achọrọ
1- 1V-ụdị akara mgbaaka bụ ihe arụ ọrụ nke mgbanaka mgbanaka na-agbanwe agbanwe, nke a na-eji dị ka ihe ntụgharị na-enweghị mgbanye akara. Ntinye akara nwere ezigbo ọrụ na mgbanwe, nwere ike ịkwụ ụgwọ maka nnagide dị ukwuu na ntụgharị ihu, nwere ike igbochi griiz n'ime ma ọ bụ nchapu mmanụ, nwekwara ike igbochi mwakpo ahụ nke mmiri na-agbapụ na mpụga ma ọ bụ ájá.
2. O mgbanaka a na-ejikarị emechi akara akara na ntinye akara. Mgbe a na-eji ya na-emechi ihe na-agagharị, ọ na-ejedebe na obere ngwa ngwa rotary. Vdị mgbanaka ụdị V na-arụkarị n'ogo dị n'èzí ma ọ bụ gburugburu dị n'ime akụkụ anọ. ngalaba nke uzo iji rụọ ọrụ akara.
Ydị mgbanaka akara ụdị YY bụ nke a na-ejikarị eme ihe na ngwaọrụ ịgbanye. Na mgbakwunye, enwere mgbatị mmiri (nchekwa nchekwa mmiri) mgbanaka akara, dị na PTFE akara ihe ịbanye na mmiri, enwere O spring, V spring, U mmiri.
3. Y X ụdị mgbanaka akara maka oghere
Ngwaahịa: eji maka mmeghari mmeghari nke hydraulic cylinder piston seal.Spepe nke ngwa: TPU: haịdrọlik na-arụ ọrụ n'ozuzu, akụrụngwa haịdrọlik na-arụ ọrụ. , rọba
Ngwa ike ngwaahịa: HS85 ± 2 ° A A na-arụ ọrụ okpomọkụ: TPU: -40 ~ + 80 ℃ CPU: -40 ~ + 120 ℃ Nrụgide ọrụ: 32Mpa Na-arụ ọrụ ọkara: mmanụ hydraulic, emulsion.
4. Na-echekwa mgbanaka maka ụdị YX ụdị
Ojiji ngwaahịa: Thiskpụrụ a dị na cylinder na-arụ ọrụ nrụgide karịrị 16Mpa na ụdị YX ụdị mgbanaka akara, ma ọ bụ ike ikuku, na-ekere òkè na ichebe mgbanaka akara ahụ. Pegba ọkụ ọkụ: -40 ~ + 100 ℃
Na-arụ ọrụ ọkara: haịdrọlik mmanụ, emulsion, aquatic ngwaahịa ekweghị ekwe: HS92 ± 5A ihe: PTFE
5. Jiri mgbanaka Y na mgbanaka X maka shaft
Ngwa: Ejiri maka akara akara piston na mgbatị hydraulic cylinder nke dị mkpa: TPU: haịdrọlik na-arụ ọrụ n'ozuzu, akụrụngwa haịdrọlik cylinder.CPU: hydraulic sịlịnda na nnukwu okpomọkụ na nnukwu mgbali mmanụ maka ihe owuwu ihe owuwu.
Ihe: PU TPU, CPU, ekweghị ekwe roba: HS85 ± 2 Celsius A okpomọkụ na-arụ ọrụ: TPU: -40 ~ + 80 ℃ CPU: -40 ~ + 120 pressure Nrụgide ọrụ: 32MPa ma ọ bụ obere
Na-arụ ọrụ ọkara: haịdrọlik mmanụ, emulsion
7. Jiri mgbanaka y na mgbanaka mgbanaka mgbanaka maka shaft
Na-arụ ọrụ ọkara: haịdrọlik mmanụ, emulsion, aquatic ngwaahịa ekweghị ekwe: HS92 ± 5A ihe: polytetrafluoroethylene dị ka: enterprise ụkpụrụ
Nke gara aga: OEM elu ruru eru Rubber o mgbanaka tent factory CHINA
Osote: Akara mmanụ traktọ
Excavator O Ring Mmezi Kit 376Pcs China Manuf ...
Katapila Excavator O Ring Mmezi Kit China ...
Silicon Green O Ring Akara Ji na mmanụ ụgbọala Injector ...
Viton Fpm Brown O mgbanaka China Manufacturer